janvier 2017 – filazantsaramada
ALAHELO: KARAZANY ROA
« Fa ny alahelo araka an’Andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena tsy hanenenana; fa miasa fahafatesana kosa ny alahelon’izao tontolo izao. » II Kor 7:10 Nirahin’i Jehovah hilaza ny amin’ny hamelezan’i Jehovah an’i Ninive i Jona, fa tafakatra teo anatrehan’i Jehovah ny faharatsiany. Nandà i Jona, nandositra hiala teo anatrehan’i Jehovah. Niondrana an-tsambo izy niala teo anatrehan’i Jehovah. […]
Publié parfilazantsaramada janvier 27, 2017 janvier 26, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur ALAHELO: KARAZANY ROA
Miha mivelatra hatrany ny fiarahamiasan’ny Feon’ny Filazantsara amin’ny Synodam-Paritany hafa Ny fikendren’ny FF dia ny hanitatra hatrany ny fiaraha-miasany amin’ireo Synodam-Paritany ao anatin’ny sahan’ny Fiangonana Loterana. Misaotra an’Andriamanitra lehibe fa dia tanteraka soa aman-tsara ny Seminera Fampiofanana antsoina hoe “Fampitaovana ny olona masina” tany amin’ny FLM Toby Nenilava Synodam-Paritany Faradofay (SPFa) ny 18, 19 Janoary […]
Publié parfilazantsaramada janvier 26, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara
« Ary izy namaly ka nanao hoe: « Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra » ; ary « tiava ny namanao tahaka ny tenanao ». Lioka 10:27 Ny teny fikasana dia nomen’Andriamanitra an’i Abrahama telo-polo amby efa-jato taona mialoha ny lalàna, nefa ny fanekena dia tsy tsoahan’ny […]
Publié parfilazantsaramada janvier 20, 2017 janvier 19, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur ANDRO MAHAFINARITRA HANDRENESANA NY FILAZANTSARA
FLM Soalandy Mitombo hatrany ny fiaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy. Mitohy noho izany ny fandefasana horonan-tsarimihetsika. Tamin’ity indray mandeha ity dia tany amin’ny FLM Soalandy, Fitandremana Tanjombato, 50 Km miala an’Antananarivo no nandefasana ny horonan-tsarimihetsika “Jesosy avy any Nazareta”. Nahatratra teo amin’ny valo-polo eo ho eo ireo ankizy tonga nijery izany. Nisy […]
Publié parfilazantsaramada janvier 18, 2017 janvier 17, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Horonan-tsarimihetsika
TANDREMANA MAFY IZAY EFA RE.
« Ny finoana dia avy amin’ny toriteny », ary izay mino an’i Jesosy no manana ny fiainana mandrakizay. « Ary amin’izany dia tokony hotandremantsika mafimafy kokoa izay efa rentsika fandrao hindaosina hiala aminy isika. » Hebreo 2:1 Ahoana no fomba hanatanterahantsika izany? Avela hitombo ao anatintsika ny Teny. Saintsainina andro aman’alina ny Tenin’Andriamanitra. Mangataka ny fitarihin’ny Fanahy Masina mba […]
Publié parfilazantsaramada janvier 13, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TANDREMANA MAFY IZAY EFA RE.
Asa fitoriana eny amin’ny Fonja
Fitoriana an-kira sy tantara an-tsehatra no nasehon’ireo voafonja vehivavy ao Antanimora Mitohy ny fiarahamiasan’ny Feon’ny Filazantsara amin’ny Fonjan’Antanimora amin’ny Fitoriana ny Filazantsara. Tahaka ny isan-taona dia nikarakara fitoriana an-kira sy tantara an-tsehatra ireo voafonja vehivavy ao Antanimora ny 13 Desambra 2016 ka ny tantaran’i Samoela mpaminany no novelominy tamin’izany. Miisa 30 ireo voafonja vehivavy nanatanteraka […]
Publié parfilazantsaramada janvier 13, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Asa fitoriana eny amin’ny Fonja
« Mitsangàna mihazavà, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr’i Jehovah efa miposaka aminao. » Isaia 60:1 Io no fiarahabana anao amin’izao fiatrehana ny taona vaovao izao. Efa tonga tokoa ny fahazavànao, dia Ilay Teny tonga nofo. Nomen’ny Tompo anao ireo teniny nandritra ny taona. Tia anao Jesosy, ary fitiavana mandrakizay no efa nitiavany anao. Ao ireo […]
Publié parfilazantsaramada janvier 6, 2017 janvier 5, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MITSANGANA MIHAZAVA
Horonan-tsarimihetsika ho fanokafana ny fankalazana ny Krismasy
Kristiana Tanora Loterana, Tanjombato Fiadanana ArarataTanora Ny 11 desambra 2016 no nanomboka ny fankalazan’ny FLM Tanjombato ny krismasy 2016. Ny Kristiana ao an-toerana moa no nikarakara sy nandrindra io fotoan-dehibe io koa dia nanasa ny Feon’ny Filazantsara izy ireo handefa ny horonan-tsarimihetsika “Ilay mpiandry ondry kely”. Maro ny namely ny antso satria dia nahatratra teo […]
Publié parfilazantsaramada janvier 5, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Horonan-tsarimihetsika ho fanokafana ny fankalazana ny Krismasy
FLM Tanjombato Fiadanana Ararata
Fampahafantarana ireo nandray anjara tamin’ny fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” Ho tohin’ny fampiofanana nokarakarain’ny Feon’ny Filazantsara (FF), niarahana tamin’ny Fitandremana Tanjombato ny 10-11 Novambra 2016, izay nahitàna solon-tena nandray anjara fito isa-piangonana; dia nisy ny fanehoana azy ireo teo anatrehan’ny Fitandremana ny Alahady 18 Desambra 2016. Izany dia notanterahin’ny mpiara-miasa avy ao amin’ny Foibe FF […]
Publié parfilazantsaramada janvier 4, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FLM Tanjombato Fiadanana Ararata